Caafimaadku waa halbowlaha nolosha. | Gaaldiid - Part 2
Bogga Hore > Caafimaadku waa halbowlaha nolosha. > Page 2
DHIIG YARI (Anemia):- Waa maxay dhiig yaridu? Dhiiga yaridu waa unugyada dhiiga cas oo yar ama xaddiga Hemogolobinta ee unugyada dhiiga cas oo yar. Hemogolobintu waa maado bir ah oo midabka dhiigana ka dhigta inuu casaado,...
Astma/Xiiqda Astma/Xiiqda waa xanuun ku dhaca marinka hawada taasoo keeni karta mararka qaarkood culays neefsaho. Sababtuna waa ruuxa oo leh cudurka marinka hawada. Inta badan waxay ku dhacdaa qofka yar sidoo kale way haleeli...
Tusmo1 Xanuunka Gulutanka:1.1 Calaamadaha:1.2 Daal badan iyo awood la’aanta.1.3 Shubanka iyo dhibaatooyinka kale ee caloosha.1.4 Miisaanka oo hoos u dhaca.1.5 Lafa xanuunka.1.6 Finanka afka.1.7 Ma dhalaysnimada.2 Daaweynta.3 Maxaan cunaa.4 Maxaan iska ilaaliyaa. Xanuunka Gulutanka:...
Tusmo1 Habka loo badbaadiyo Ruux Wadnuhu dhacay.2 Camaliyada dib ukicinta Wadnaha. Habka loo badbaadiyo Ruux Wadnuhu dhacay. Dib usoo kicinta Wadnaha (CPR) waa gargaarka degdega ah ee la siiyo ruuxa wadnuhu istaagay ama...
Tusmo1 Xasaasiyad (allergic)1.1 Calaamadaha1.2 Daaweynta: Xasaasiyad (allergic) Haddii qof uu xasaasiyad leeyahay waxa suurta gala in uu ka jawaab celiyo, tusaale ahaan waxa ruuxu dareemayaa duuf qoyan, waxa ku adkaanaysa neefta, indho cuncun ama...
Tusmo1 Dhiig-Bax2 Dhiig-baxa Jirka gudahiisa.3 Xanuunka Xinjirbeelka. Dhiig-Bax Ruuxa qaangaadhka ah jirkiisa waxa ku jira dhiig gaadhaya Shan ama Lix litir oo dhiig ah. Shaqada ugu wayn ee dhiigu qabtaa waa inuu qaado oksijiinta...
Xanuunka Sonkorta Caanaha (Lactose)
Xanuunka Sonkorta Caanaha (Lactose Intolerence) haduu ruux qabo jirrada diidmada Sonkorcaaneedka, ma qaadan karo sonkorta caanaha, Lactose. Xuubka Xiidmaha waxa uu soo daayaa dheecaan (lactase) kaas oo caawiya inuu burburiyo sonkorta ku jirta caanaha,...
Tusmo1 Xasaasiyada Cayayaanka:1.1 Calaamadaha:1.2 Goormaan daawo u baahanay:1.3 Daawada:1.4 Maxaan sameeyaa si aan iskaga dhawro qaniinyada cayayaanka: Xasaasiyada Cayayaanka: Xasaasiyadu waa ruuxa oon udul qaadan karayn maado ama shay. Haddii ruuxu leeyahay xasaasiyada cayayaanka...
Xasaasiyada Urta (Carafta)
Xasaasiyad ureed/carafeed Ruuxa qaba xasaasiyad ureed waxa uu dareemi karaa qufac, duuf iyo oohin, tusaale ahaan marka uu uriyo urta sigaarka, manka, ubaxyada qaarkood iyo barfiimada/cadarada. Dhibtaasi waxay waxyeelayn kartaa hawl maalmeedakaag. Dhab ahaantii...
AMEBIASIS:- Waa cudur uu keeno noole hal ungle ah oo loo yaqaano Entamoeba histolytica. Yaa halis ugu jir cuduran? Cudurkan amebiasis wuu ku dhici karaa cid kasta, gaar ahaan dadka saboolka ah ee ku...